Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » isikhululo » ISaudi Arabia, iYemen kunye nophuhliso lwesikhululo seenqwelomoya esitsha
Airlines • isikhululo • Iindaba zeManyano • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba zikaRhulumente • iindaba • Cinezela iZaziso • Iindaba zaseSaudi Arabia zokuPhula • Tourism • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba eziQhekezayo zaseYemen
Novemba 11, 2018
Marib___ I_i-Saudi_Development_n_Nokwakhiwa kabusha kweNkqubo_Ye_Yemen
Xa ucinga malunga ne-Yemen ne-Saudi Arabia uninzi alunakucinga ngeeprojekthi zesikhululo seenqwelomoya esitsha. Ngokumangalisayo uBukumkani baseSaudi Arabia namhlanje babhengeze iprojekthi entsha yokuphucula isikhululo seenqwelomoya e-Yemen ethi, xa igqityiwe, ihlale abahambi abazizigidi ezi-2 ngonyaka.
Xa ucinga malunga ne-Yemen ne-Saudi Arabia uninzi alunakucinga ngeeprojekthi zesikhululo seenqwelomoya esitsha. Ngokumangalisayo uBukumkani baseSaudi Arabia namhlanje babhengeze iprojekthi entsha yenqwelomoya yophuhliso kwisikhululo seenqwelomoya e Yemen ukuba, xa igqityiwe, iya kulungiselela abahambi abazizigidi ezi-2 ngonyaka.
Inkqubo yoPhuhliso kunye noKwakha eSaudi Yemen(SDRPY) ibhengeze ukuba isikhululo seenqwelomoya esiza kwakhiwa kwakhona sikwisixeko sase Marib, empuma yenkunzi Sanaa. Nje ukuba igqityiwe, iya kubonelela ngeziseko zophuhliso ezibalulekileyo kwilizwe nakwingingqi. Ngelixa kuqhubeka, iyakudala malunga ne-1,000 yemisebenzi esisigxina ukugqitywa, imisebenzi ye-5,000 ngexesha lokwakha, kunye ne-10,000 yemisebenzi engathanga ngqo kumacandelo ancedisayo. Umsebenzi kufuneka wenziwe yile nkampani inye eyakhayo kwaye yayila Chicago isikhululo seenqwelomoya.
ISaudi Arabia Unozakuzaku kwi Yemen, U-Mohammed Al Jaber, Umlawuli we-SDRPY uthe, “Le yiprojekthi enomdla efikelela entliziyweni yento Yemen iimfuno ngoku ngokwengqesho namathuba ezoqoqosho. Ukusondela kwayo kwikomkhulu kuthetha ukuba inokuvuselela iinzame zokujoyina imimandla ye-al-Jawf, Shabwah kunye neHadramaut. Lo msebenzi ubalulekileyo, kunye neeprojekthi ezininzi ezinje, azinakulinda- abantu be Yemen siyayidinga ngoku, nanjengoko singadinwa sisisombululo sezopolitiko kumlo. ”
I-SDRPY ikwasebenza kwezi projekthi zilandelayo kwilizwe liphela: iKing Salman yezeMfundo kunye neSixeko sezoNyango, iSibhedlele saseSeiyun, iZikolo i-al-Ghaydah, iProjekthi yaManzi i-al-Ghaydah, iprojekthi yokomba kakuhle, izikhululo zamandla ezibini eSocotra, iziko lokucoca iintso, ipetroleum iprojekhthi yeziphumo, iprojekthi enzima yokuhlala, iiposti zemida, ukhuseleko lwesizwe kunye neziko lokulwa ubunqolobi. ISaudi Arabia ni kezelwe $ 2 billion ngoncedo lwemali ukuya YeYemen ibhanki esembindini ukunceda ukomeleza imali yelizwe kwiinyanga nje ezimbalwa ezidlulileyo.